Yusuf Garaad: Xarig & Xabaal-Wadareed - Taxanaha 89 - 90 - Qaybta Labaad
Xarig & Xabaal-Wadareed - Taxanaha 89 - 90 - Qaybta Labaad
In afar boqol oo ruux isla maalin gudaheed lagu dilay Muqdisho waxay ahayd murugo inteeda la'eg. Laakiin intii aan joognay Faransiiska dhibka Soomaaliya ka dhacay kuma koobnayn 400 oo ruux oo maalin keliya lagu dilay Muqdisho. Ma ahayn oo keliya in isla maalintaas xabsiga loo taxaabay dad aad u fara badan. Dilka iyo xariggu intaas kuma istaagin.
Airporka Muqdisho markii aan ka soo degay oo aan ka soo gudbay Saraakiisha Socdaalka, waxaan ku imid saraakiisha kastamka.
Dadkeennii dayaaradda ka soo degay oo hal saf isdaba soconna ayaan ku nimid miisas is garab yaalla oo dhanka midig naga haya. Miis kasta waxaa gadaashiisa taagan nin ama laba baaraya boorsooyinka. Midka igu soo aaday wuxuu furay boorsadeyda, asaga oo aan aniga i eegeyn ee boorsadeyda marba shey kor u qaadaya ayuu igu yiri hebel iyo hebel waa la xiray. Waa labadeydii saaxiib ee walaalkeey ii soo sheegay.
Posted by Yusuf Garaad at 05:12:00